के नवजोत सिंह सिद्धुे फेरि बिजेपीको ढोका ढकढक्याउँछन ? - Nepali Online News Media-shikharnews.com
के नवजोत सिंह सिद्धुे फेरि बिजेपीको ढोका ढकढक्याउँछन ?
बीबीसी। कर्नाटक र गोवामा संकटको सामना गरिरहेको कांग्रेसमा नवजोत सिंह सिद्धूले अमरिन्दर सिंह मन्त्रिमण्डलबाट राजीनामा दिएका छन्। सिद्धूले आइतबार ट्विटरमा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीलाई पठाएको राजीनामाको कपी पोस्ट गर्दै लेखे–१० जुन २०१९ मा राहुल गान्धीलाई बुझाएको मेरो राजीनामा।’ सिद्धूले मुख्यमन्त्रीलाई पनि आफ्नो राजीनामा पठाएका छन्।
पंजाबका मुख्यमन्त्री क्याप्टेन अमरिन्दर सिंह र नवजोत सिंह सिद्धूबीच लामो समयदेखि विवाद चल्दै आएको थियो। लोकसभा निर्वाचनमा खराब प्रदर्शनपछि यो विवाद सतहमा आएको थियो। अमरिन्दर सिंहले पंजाबमा कांग्रेसको प्रदर्शन खराब हुनुका कारण सिद्धूलाई दोष दिए। त्यसपछि सिद्धूको मन्त्रालय पनि परिवर्तन गरिदिए।
शहरी निकायसँगै पर्यटन–संस्कृति विभाग फिर्ता लिएर सिद्धूलाई नवीकरणीय विभागको जिम्मेवारी दिए। नवजोति सिंह सिद्धूले विरोध स्वरुप नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेनन् बरु उनले राजीनामा दिए। कांग्रेस पहिला देखि नै दुई राज्यमा आफ्ना विधायक जोगाउने कोशिशमा जुटेको छ। कर्नाटकमा कांग्रेस– जेडीएस गठबन्धनको सरकारमाथि खतराका घण्टी बजेको छ।
पंजाबमा चलिरहेको यो टकराव अब राजीनामा सम्म पुगेको छ। कांग्रेसमा सिद्धू जनवरी २०१७ मा आएका थिए। करिव साढे दुई वर्षको अवधिमा सिद्धू राजीनामासम्म पुगे। वरिष्ठ पत्रकार जगतार सिंह भन्छन्, ‘पंजाबमा यो टकराव पार्टीको होइन। दुई जनाको व्यक्तिगत टकराव हो। यहाँ सिद्धू एक्लै भएका छन्। उनको पार्टीमा कुनै ठूलो समर्थन वा आधार समूह छैन ।
यस्तोमा उनको राजीनामाले पंजाब कांग्रेसमा कुनै खास असर पर्दैन।’ ‘उनी सुरुदेखि कांग्रेसमा आबद्ध थिएनन्। सुरुमा बिजेपीमा थिए, फेरि आम आदमी पार्टीसँग उनको नाम जोडियो। आफ्नो अलग मोर्चा पनि बनाए। फेरि कांग्रेसमा आए। उनको कांग्रेसमा कुनै समर्थन आधार बन्न सकेन। पंजाबका नेताभन्दा धेरै उनलाई दिल्लीमा राहुल गान्धी र प्रियंका गान्धीको समर्थन रह्यो।
अब राहुल गान्धीले पनि यो विषयमा धेरै दखल दिएका छैनन्।’ जगतार सिंहका अनुसार एकतर्फ पार्टीमा एक व्यक्ति आफ्नो लडाइँ डलिरहेको थियो, जसमा उनलाई राहुल गान्धीको समर्थन थियो। तर अब त्यो समर्थन पनि छैन। यो सिद्धूको निजी संकट हो र यो भन्दा अगाडि कुरा बढेको छैन। तर राजनीतिक विश्लेषक हरजेश्वर पाल सिंह यो विषयमा केही हदसम्म असहमति जनाउँछन्।
उनका अनुसार सिद्धूको राजीनामाले कांग्रेसमा असर पर्नसक्छ। हरजेश्वर पाल सिंह भन्छन्, ‘सिद्धू एक लोकप्रिय नेता हुन्। र अकाली दल विरुद्ध पनि खुलेर बोलिरहेका छन्। यहाँ मानिसको के धारणा थियो भने कांग्रेसको अकाली दलसँग भित्री साँठगाँठ भएको छ। जसले सिद्धूलाई बुझ्छ उसले कांग्रेसले अकाली दल विरुद्ध बोलिरहेको बुझ्छन्।
यस्तोमा सिद्धूको राजीनामाले पार्टीलाई भित्री रुपमा असर नपरेपनि लोकप्रियतामा भने असर पर्छ।’ पंजाबमा दुवै नेताबीचको विवाद अब कसैबाट लुकेको छैन। अमरिन्दर सिंहले के पनि स्वीकार गरेका छन् भने सिद्धूको राजनीतिक आकांक्षा मुख्यमन्त्रीको पदमा बस्ने रहेको छ। तर सिद्धूको अवस्था यसरी बिग्रियो की उनले मन्त्री पदबाट नै राजीनामा दिनुपर्यो।
जगतार सिंह भन्छन््, ‘सिद्धूसँग अब उनी उपाय नै बाँकी रहेन। उनको मन्त्रालय परिवर्तन गरियो र सिद्धूको विरोधमा अमरिन्दर सिंह खुलेर बोल्न थाले। उनी आफ्नो गुनासो लिएर राहुल गान्धीसम्म पनि पुगे होलान।’ ‘तर यो राजीनामा दश जुनमा सिद्धूले दिएका हुन्। राहुल गान्धीले केही गर्ने थिए भने यो बीचमा गरिसक्थे। फेरि पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्ने कुरा मुख्यमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ।
पहिला उनलाई केन्द्रीय नेतृत्वबाट जुन समर्थन थियो र अहिले त्यो समर्थन प्राप्त भइरहेको छैन। त्यस्तोमा उनले राजीनामा दिएर थोरै र ठूलो कदम बढाएका छन्।’
नवजोत सिंह सिद्धू बिजेपीमा बसेर काम गरिसकेका छन्। र, आम आद्मी पार्टीसँग पनि उनको विवाद भएको छ। यस्तोमा कांग्रेसमा आफ्नो स्थिति कमजोर हुँदा उनीसँग के विकल्प बाँकी छ?
हरजेश्वर पाल सिंहका अनुसार कांग्रेसमा उनको अवस्था कमजोर भएपनि सिद्धू अहिले नै बीजेपी र अकाली दलमा जाने अवस्था छैन। सिद्धूले दुवै दलको यति धेरै विरोध गरेका छन् की यदि उनी बीजेपीमा गए भने उनको करियर नराम्ररी प्रभावित हुनेछ। उनको यस्तो फण्डाको अहिले सामाजिक सञ्जालमा भने पक्ष र विपक्षामा प्रतिक्रिया आइरहेको छ ।
इन्टरपोलको खोजीमा रहेको व्यक्ति गोंगबुबाट पक्राउ
इन्टरपोल महासचिवालयबाट डिफ्युजन जारी गरिएका फरार एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गतको कसुर मुद्धामा गोरखा माझगाँउवेशी बस्ने २४ वर्षीय सुरेश गुरुङलाई शनिबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
इन्टरपोल दोहा कतारको बोर्डर इम्मीग्रेसेन रेकर्ड अनुसार गुरुङ कतारमा रहेको र त्यहाँबाट असार २६ गते नेपाल प्रवेश गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा अनुसन्धानमा खटिएको प्रहरीले काठमाडौंको गोंगबु मित्रनगरबाट पक्राउ गरेको हो ।
गुरुङले एक महिलालाई विभिन्न अश्लील म्यासेज लेखी पठाएको र इमोमार्फत अपशब्द लेखेर धम्की समेत दिई प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गरेको भन्दै वैशाख ८ गते उनीविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गतको कसुर मुद्दामा महानगरीय अपराध महाशाखा टेकुमा जाहेरी परेको थियो ।
गुरुङमाथि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंबाट थप आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
दमौली। नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह निकट चार कार्यकर्तालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले सोमबार पक्राउ गरेको छ। जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशमा रिहा भएका चन्द निकट चार कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
राजद्रोहको मुद्दामा गत असार ४ गतेदेखि तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा रहेका उनीहरुलाई अदालतले सोमबार फौजदारी कार्य्विधि संहिता, २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उनीहरु विरुद्ध स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा राजद्रोहको मुद्दा दर्ता भएका कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाको पत्रअनुसार पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहँुका प्रहरी नायब उपरीक्षक लीलाराज लामिछानेले जानकारी दिए। लामिछानेका अनुसार पक्राउ परेका चारैलाई स्याङ्जा पठाइनेछ।
गत असार ४ गते चारै जनालाई प्रहरीले पोखराको मुस्ताङचोकबाट पक्राउ गरी तनहँु ल्याएको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा उच्च अदालत पोखराले उनीहरु सबैलाई रिहा गर्न असार ३ गते आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशमा रिहा भएका उनीहरु तनहुँ जिल्ला अदालतमा राजद्रोहको मुद्दा दर्ता भएका कारण पोखराबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसअघि गत जेठ २५ गते कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाबाट उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
सैन्य कारबाहीमा तालिबानका कमाण्डर मारिए
भारत-पाकिस्तान तनाव, गोली हानाहानमा सैनिकको मृत्यु
जापानको आओमोरीमा भूकम्प
भारतले आज ७३ औं स्वतन्त्रता दिवश मनाउँदै…